Archive du 20171207
Fanesorana ny praiminisitra Andro sisa isaina ?
Loharanom-baovao iray akaiky ny fitondrana no nahenoana fa tsy haharitra ela intsony eo amin’ny toerany ny praiminisitra Mahafaly Solonandrasana Olivier.
Fifandraisan’i Madagasikara sy Japon Miditra amin’ny kihon-dalana vaovao
Nihaona tamin’ny Amperora Japonais Akihito sy ny mpanjakavavy Michiko Shoda tao amin’ny Lapan’i Kyüden ny filoham-pirenena Malagasy Hery Rajaonarimampianina mivady omaly alarobia 6 novambra, namaranana ny fitsidihana ara-panjakana nataony tany Japon.
Kolikoly amin’ny fanaovana politika Areti-mandoza tsy maintsy tsaboina
Nodinihina nandritra ny atrikasa tetsy amin’ny hotel Colbert Antaninarenina omaly ny mahakasika ny soatoavina politika sy ny ady amin’ny kolikoly mba hanamafisana orina ny demokrasia any anatin’ireo antoko politika sy hahatonga ny olom-pirenena hahatoky kokoa azy ireo.
Dinika ho fanavotam-pirenena Hihazakazaka hanabe mpifidy
Ny 1 desambra teo ka hatramin’ny faran’ny volana janoary 2018 no fe-potoana sisa ahafahan’ireo olom-pirenena afaka mifidy manamarina sy mametraka ny anarany ao anatin’ny lisi-pifidianana, raha ny fanazavan’ny avy eo anivon’ny vovonana politika Dinika ho fanavotam-pirenena na DFP tetsy amin’ny Au Bon accueil Ambatonakanga omaly.
Porofoy amiko fa mahantra ny Malagasy, Asehoy amiko fa tsy taka-bidy ny kafé sy mofogasy. Atondroy ahy fa mirongatra ny olon-dratsy, Hamarino amiko fa efa foana ny parasy..
Vondron’ny Taxi Matihanina « Fotoana mahatsara ny karama izao ka aoka tsy hoelingelenina »
Miezaka manazava ny sain’ireo mpisehatra TAXI namany amin’ny hanatsarana ny asa fiveloman’izy ireo ny vondron’ny taxi matihanina VTM.
Fiara halatra avy any ivelany Mafia Karana no atidoha
Mbola mitohy hatrany ary hitan'ireo mpanaraka amin'ny alalan'ny fampahalalam-baovao maneran-tany ny fisiana halatra fiara raitra izay miroborobo fatratra any Eoropa ankehitriny.
Fiaraha-miasa amin’ny Alemaina Mifantoka amin’ny angovo, fambolena ary jono
Tanterahina ao amin’ny Lapan’i Mahazoarivo mandritra ny roa andro nanomboka omaly ny dinika politika sy stratejika andiany faharoa ao anatin’ny fanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin’i Madagasikara sy Alemana.
Fanafarana vary avy any ivelany Vahaolana tefy maika, hoy i Lita Rabetsara
Vary vao nohafarana avy any Inde sy Birmania ary Pakistan 15 kamiao no tonga tao amin’ny tsenan’Anosibe omaly ho vahaolan’ny fitondram-panjakana hampidinana ny vidim-bary eny an-tsena.
Tsiroanomandidy Navotsotry ny fitsarana ilay mpanao taratasin’omby hosoka
Velon-taraina ireo mpisehatra amin’ny fiompiana omby mivondrona ao amin’ny FIMPI Omby manoloana ny famotsoran’ny fitsarana ilay olona voalaza fampanasonia ny taratasin’omby hosoka tany Tsiroanomandidy.
Ady Totohondry Malagasy Mihamafy ny krizy anatiny
Saika ho isan’andro dia hahenoana fifamaliana amin’ny haino aman-jery hifanaovan’Atoa Rabarisoa Hery Mamy filohan’ny federasion’ny ady totohondry Malagasy sy ny filoha lefiny Andriamanampisoa Gégé Bosco.
Fanondranana hazo sarobidy Mbola voasazy i Madagasikara
Tontosa tany Genève Suisse ny 27 novambra ka hatramin’ny 1 novambra lasa teo ny fivorian’ny komity mpanatanteraka eo anivon’ny CITES na ny fifanarahana momba ny varotra iraisam-pirenena mikasika ny zava-manan’aina sy zava-maniry ahiana ho lany tamingana.
Fanitsiam-pitantanana eto Madagasikara Nankatoavin’ny tahirim-bola iraisam-pirenena
Nanambara tetsy amin’ny minisiteran’ny vola sy ny tetibola Antaninarenina omaly ny minisitry ny vola sy ny tetibola, Vonintsalama Andriambololona sy ny governoran’ny banky foiben’i Madagasikara, Hervé Rasolofondraibe,
IT University Notsidihan’ny minisitry ny fifandraisan-davitra
Taorian’ireo oniversitem-panjakana maro any amin’ny faritra dia ny IT University etsy Andoharanofotsy indray, sekoly ambony tsy miankina iray mampianatra ny lalam-piofanana informatika avo lenta no nosafidian’ny minisitry ny paositra sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampivoarana ny haitao ara-kajy mirindra Neypatraiky André Rakotomamonjy notsidihana, omaly.
Cisco Antananarivo Renivohitra Efa nahazo “kits scolaires” avokoa ny mpianatra
Efa tapitra nahazo ilay “kits scolaires” avy amin’ny filoham-pirenena mivady avokoa ireo mpianatra eo anivon’ny fari-piadidiam-pampianarana Antananarivo Renivohitra, hoy Rakotozafy Ramasy Harisoa, tompon’andraikitra voalohany eo anivon’ity Cisco iray ity, omaly.
Fampandrosoana ny faritra Bara Manaitra ny fanjakana ny FITEBA
Mbola lany soa aman-tsara ho filohan’ny firaisankinan’ny terak’Ibara indray Atoa Nakany Charlie.
Fanendahana teny Ivandry Nodimandry ilay tovovavy voatsatok’antsy
Nodimandry ny talata 5 desambra teo i Fy Safidinandrianina na Fiderana mpianatry ny anjerimanontolon’Antananarivo naratra mafy nandritra ny fanendahana sy tsindron’antsy nahazo azy teny Ivandry ny zoma 1 desambra teo.
Johnny Halliday Matin’ny homamiadan’ny avokavoka
Nodimandry ny alin’ny talata hifoha alarobia teo amin’ny faha-74 taonany ilay mpihira Rock Frantsay malaza, Johnny Halliday na Jean-Philippe Léo Smet amin’ny anarany feno.
Donald Trump Manaikyan’I Jerosalema ho renivohitr’Israely Miteraka resabe sy fimenomenomana maneran-tany mihitsy ny filazan’ny filohaAmerikanina Donald Trump fa ekena ny maha renivohitry ny fanjakan’Israely an’i Jerosalema.Ny resaka sy fifam